အစိုးရ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရ? - Yangon Media Group
အစိုးရ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မူဝါဒများ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု မရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရ?
အစိုးရ၏စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများရှင်းလင်း ပြတ်သားမှုမရှိခြင်းကြောင့် မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှု ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားကြောင်း ရိုလင်ဘာဂါ(Roland Berger)၏ ၂ဝ၁၇ မြန်မာ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းတွင် ဖော် ပြထားကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဂျာမန်အမွေအနှစ်နှင့်ဥရောပ အခြေစိုက်တစ်ဦးတည်းသော ဦး ဆောင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် ရိုလင်ဘာဂါသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စီးပွား ရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုကို ပြည်ထောင် စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့်ပူးပေါင်း၍ ၂ဝ၁၇ မြန်မာ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစစ်တမ်းကို ကောက်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းစစ်တမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသည် ယမန် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်က ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့သော်လည်း ယခု ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် ၄၉ ရာခိုင်နှုန်းသို့ သိသိသာသာလျော့ ကျသွားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ရိုလင်ဘာဂါ၏အရှေ့တောင် အာရှအုပ်ချုပ်မှုမိတ်ဖက်ဖြစ်သည့် မစ္စတာသောမတ်ကလော့ဇ်က”ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး မူဝါဒဆိုင်ရာကောင်းမွန်တဲ့ လုပ် ဆောင်ချက်တွေကို သတိထားမိကြပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ အစိုးရကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီးပွား ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ ၁၂ ချက်က ဥပမာကောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ကြီးဌာနတွေကလည်း ကဏ္ဍအလိုက် အနေအထားအချို့ကိုပိုမိုရှင်း လင်းအောင်ရုတ်ချည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍဘက်ကရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေချမှတ် ပေးဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစစ်တမ်းက ရခိုင်ဒေသမှာ လတ်တ လောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေ တွေမတိုင်မီ ကောက်ယူထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုအချိန်မျှာနည-ျငအငလန ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ တွေအနေနဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အပေါ် ယုံကြည်မှုကပိုမိုကျဆင်းနိုင် ပါသေးတယ်”ဟု ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ကကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ပြောသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများယုံကြည် မှုလျော့ကျသွားရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ စီးပွားရေးဆိုင် ရာမူဝါဒနှင့် စီမံကိန်းရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ၇၇ ရာခိုင်နှုန်းသောကုမ္ပဏီများက သိသာထင်ရှားသော ပြဿနာအ ဖြစ်ဖော်ပြထားကြောင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားရှားပါးခြင်း၊ အစိုးရပြတ် သားသော စီးပွားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ များမရှိခြင်း၊ မမျှော်မှန်းနိုင်သော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေချမှတ်လာနိုင်သည့်အခြေအနေရှိနေခြင်းနှင့် မမျှော် လင့်နိုင်သော၊ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက် သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများချမှတ် ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း လျော့ကျသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ယင်း စစ်တမ်းတွင်ဖော်ပြထားကြောင်း သိရသည်။
စာပေညီလာခံမှ တစ်ဆင့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် အထောက်အကူပေးမည့် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန် အ
တည်ဆောက်ဆဲ ဓာတ်ဆီဆိုင်ကို ဖွင့်ခွင့်မပြုရန် တောင်ဥက္ကလာတွင် ဆန္ဒပြ
မကွေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ကျေးရွာ နှစ်ရွာကို စွန့်ပစ်အမှိုက် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ကောင်းမွ
ဟုမ္မလင်း၌ ပရဟိတဂေဟာ ဆောက်လုပ်နေသော မြေနေရာအား မြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥက္ကဋ္ဌက တားမြစ??
နေ့စားလပေး မူလတန်းပြများကို ပါမစ်နစ်အဖြစ် တစ်ပါတည်းခန့်အပ်နိုင်ရန် ဆွေးနွေးနေ
မိုးရာသီ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း ဒေသများတွင် အရိပ်ရ??
မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မာရသွန်အပြေးပြိုင်ပွဲ အမျိုးအစာ?